Gwuo dị ka 'Ọjọọ Ọjọọ' Ash Williams na 'Skyrim' - iHorror
Mbido Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ Gwuo dị ka 'Ọjọọ Nwụrụ Anwụ' Ash Williams na 'Skyrim'
Gwuo dị ka 'Ọjọọ Nwụrụ Anwụ' Ash Williams na 'Skyrim'
by Trey Hilburn III July 20, 2021 892 echiche
O doro anya na anyị niile egwuri egwu Skyrim na usoro na ikpo okwu ọ bụla nke ụmụ mmadụ maara ugbu a. Todd Howard na Bethesda kwenyesiri ike na Skyrim ga-emesị mee ihe niile pong ọ bụrụ na e nye gị oge zuru ezu. Anaghị m eme mkpesa na ọ bụ egwuregwu dị egwu. Na mgbakwunye, mods bụ ihe ọchị. Verydị dị jụụ nke PC Gamer gosipụtara, bụ nke na-ahụ na ị na-ewere ọrụ nke Ọjọọ Nwụrụ Anwụ Ash Williams site na nke ozo… na ikekwe puku Skyrim na-egwu site na.
The mod na-ahụ na ị na-na ọrụ nke Ash zuru ezu na chainsaw na olu. Nke ahụ ziri ezi, ọ na-abịa juputara na ihe niile kachasị mma ya, nke ahụ ga-ejide n'aka na ị na-arịọ Skyrim iji nye gị shuga ná ngwụsị nke abalị.
Iji na-egwu dị ka Ash ị ga-awụnye Evil dead mod ma si ebe ahu gawa. Ọ bara uru ịwụnye ọzọ Skyrim na oge ọ ga-ewe gị itinye mod ahụ.
Yabụ, kedu ihe ị kwuru, Screwhead? You ga-ewere ya Skyrim mikpuo dika onye nzọpụta anyị hụrụ n'anya Ash Williams? Mee ka anyi mara na ngalaba a.
Onye nduzi egwu Street nwere nnukwu atumatu banyere otu esi agbasa elu-igwe. Gụkwuo ebe a.